Posted By: KongoLisolowaa: Agoosto 22, 2020 00: 30 No Comments
Aqoontu waa gogol-dhaafka macluumaadka aad ka soo uruurisay wixii aad soo heshay inta lagu jiro safarkaaga, fiirso, fiirso, ka fikir oo maqal (...) « Aqoonta waxay la xiriirtaa gebi ahaanba banaanka qofka. Ogow: ogow waad baran kartaa markasta. »
Laakiin aqoontani waa waxa aadan aqoon, laakiin waxay ka timid abuuraha. La aqoontu kama timaaddo bini-aadamka, sida aqoonta, laakiin waxay ka timaadaa abuuraha. Marka aqoontu waa dhinac dhexdeena.
Ninkii caqli lihi aqoontiisa uma muujiyo; nacasyadu waxay muujiyaan doqonnimadooda!
Erayga KL & Maahmaah Sulaymaan
Sep30 01: 17